Yini okufanele ngiyibeke phambili phakathi komklamo wewebhu nokusekela injini yokusesha?
Ifilosofi ye-Google ithi kanje, "kufanele ucabange ngethuba elihle lomsebenzisi ngesayithi lakho, ukuchuma kuyolandela. "Nokho, iningi labanikazi bewebhusayithi kanye nongcweti yokwenza umsebenzi wokusesha akuthathi ngokujulile lesi sitatimende, ukudala ikhasi lewebhu elenzelwe ngokuyinhloko ibhendi yokucinga, hhayi kubasebenzisi abajwayelekile. Ngokwenza kanjalo, banciphisa isikhundla sabo futhi baphakamise izinga lokunciphisa.
Namuhla, i-Google ithi ukuthuthukiswa kokuhlangenwe nakho komsebenzisi kuyigugu kakhulu kunokuklanywa nje kokusebenza kwe-injini yokusesha. Imibono ye-SEO nokuhlangenwe nakho komsebenzisi okuthakazelisayo kuyaba okuhambisanayo futhi okuhlobene, futhi amawebhsayithi ekhwalithi aklanyelwe abasebenzisi esikhundleni sezinjini zokusesha kubangelwa iwebhusayithi ye-SEO ngcono nezinga eliphezulu. Abaqambi bewebhu abanokuhlangenwe nakho bacabangela kokubili izici ze-SEO ne-UX ukwenza iwebhusayithi isebenza kahle kokubili izinjini nabasebenzisi. Kule ngqikithi, ngizobhala izinto ezibalulekile ze-UX ezingathinta isikhundla sewebsite futhi uthuthukise isayithi lakho le-SEO.
Ukuhlelwa kweWeb kanye nezinsiza zokusungula injini yokusesha
Umklamo ophendulayo weselula
i-Google Google yenza ukubuyekezwa kwe-rankings okwenza ukuba amawebusayithi abe nobuhlobo obuhle njenge-factor factor ranking. Ngokusho kwalesi sibuyekezo, wonke amasayithi kufanele afaneleke futhi asebenze kuwo wonke amadivayisi weselula namaphilisi. Ngakho-ke nanamuhla uma ungathanda ukubeka isikhundla ekhasini lokuqala le-Google, kufanele ngokusobala ukuklama isayithi lakho hhayi kuphela ngamadokhumenti kodwa futhi nezikrini zeselula.
Kunezindlela ezintathu ezizithandayo zokuklama amadivaysi eselula - i-web design responsive, ukukhonza okunamandla nama-URL ahlukene. Noma kunjalo, umklamo ophendulayo uyindlela engcono kakhulu yokuthuthukisa iwebhusayithi ye-SEO. Ngomklamo ophendulayo, unikezela amakhasimende akho amathuba okusebenzisa inguqulo efanayo yesayithi lakho kumadivayisi wabo eselula. Ezinye izindlela zokuthuthukiswa kwe-mobile-friendly friendship zisebenziseka kangako njengoba zihlukanisa inguqulo yewebhu yeselula kusuka kwideskithophu enkulu yedeskithophu futhi yenza isikhundla se-mobile version ngokwayo. Ukusebenzisa injini yokusesha kanye nokuhlangenwe nakho okuphelele komsebenzisi kuhlangene uma kuziwa kumasayithi weselula. Qinisekisa ukuthi ukukhishwa kwenguqulo yakho yeselula kwenza abasebenzisi baqonde indlela yakho kalula. Ngakho ukuze uthuthukise isipiliyoni sabo sefoni nesayithi lakho, shiya isikhala phakathi kwezinkinobho futhi ugweme ukusebenzisa into enkulu kakhulu noma encane kakhulu kanye nama-pop-ups.
Umqulu ongapheli kufanele usetshenziswe ngokuhlakanipha
Ungathuthukisa isipiliyoni sakho sokuvakashela iwebhusayithi ngokusebenzisa imiqulu engapheli lapho okuqukethwe okuqhubekayo kulayishwa khona umqulu womsebenzisi kuya phansi kwekhasi lewebhu. Kodwa-ke, kulokhu, i-Google bots ayikwazi ukulingisa ukuziphatha komsebenzisi, futhi okuqukethwe okubonakala kubasebenzisi kuhlala kungabonakali yi-bots search. Uma ucabanga ukuthi isayithi lakho liyadingeka into enjalo yokuklama njengomqulu ongapheli, yakha uchungechunge oluwubugebengu eceleni kwemiqulu eminingi. Kuzokusiza ukuba uthuthukise isipiliyoni somsebenzisi ngokuvumela ukuba bathole kalula lokho abakudingayo.
Gwema ukusebenzisa i-click-to-expand
ingqondo uma kuziwa ekuhlanganisweni kokusebenza kwenjini yokucinga nokuhlangenwe nakho komsebenzisi. Abaningi abaklami bavame ukusebenzisa abasebenzisi bethebhu abasebenza bangase bachofoze kokuqukethwe okwengeziwe. Le nqubo isetshenziselwa kabanzi kuma-blogs nakwebhusayithi ye-e-commerce egcwele ulwazi. Kanye nomqulu ongapheli, isici sokuqhafaza kuya kokunweba angeke samukelwe yi-Google. Kukhona inkolelo yokuthi i-Google bots ayikwazi ukuphazamisa lolu hlobo lokuqukethwe okufihliwe. Ngakho-ke, ungasebenzisa isici sokuchofoza-to-expand uma usebenzisa umkhuba kancane. Ukuchofoza kuya kokunweba okuqukethwe kungabamba iqhaza kumklamo wakho wewebhu we-minimalistic, kodwa ukuheha isipiliyoni somsebenzisi, kulokhu, kungalimaza isikhundla sakho sewebhusayithi Source .